DIP (iyada oo loo marayo shirkii godka) - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Ka dib markii qaybaha SMT la dhigo & QC'ed, tallaabada xigta waa in looxyada loo wareejiyo wax soo saarka DIP si loo dhammaystiro isku xidhka daloolka.
QAADO = xirmo laba-layn ah, oo loo yaqaan 'DIP', waa qaab isku-dhafan oo isku-dhafan oo wareegsan. Qaabka wareegga isku-dhafan waa afargeesle, waxaana jira laba saf oo biinanka isbarbar socda labada dhinac ee IC, kuwaas oo loo yaqaan madaxyada pin. Qaybaha xirmada DIP waxaa lagu kala iibin karaa iyada oo la dhex gelinayo daloolada guddiga wareega ee daabacan ama lagu ridi karo godka DIP.
1. Astaamaha xirmada DIP:
1. Waxay ku habboon tahay in la sii daayo daloolka PCB
2. Wadada PCB-ka oo ka fudud TO xirmada
3. Hawlgal fudud
2. Codsiga DIP:
CPU-ga 4004/8008/8086/8088, diode, caabbinta wax-qabadka
3. Waxqabadka DIP:
Qalab isticmaalaya habkan baakidhku wuxuu leeyahay laba saf oo biinano ah, oo si toos ah loogu iibin karo godka godka leh qaab DIP ah ama lagu iibiyo tiro isku mid ah godad dhejiska ah. Astaamihiisu waa inay si fudud ku guuleysan karto alxanka godadka looxyada PCB-ga oo uu si fiican ula jaanqaadi karo Motherboard-ka.
4. Farqiga u dhexeeya SMT & DIP
SMT guud ahaan waxay ku dhajisaa qaybo ka sameysan dusha sare ee leedhka ama hoggaanka gaaban. Jinka Alxanku wuxuu ubaahan yahay in lagu daabaco sabuuradda, ka dibna lagu rakibo mopper qashin, ka dibna aaladda ayaa lagu hagaajiyaa dib u soo celinta qashinka.
DIP soldering waa qalab xirmo toos ah loo soo baakadeeyay, kaas oo lagu hagaajiyay qashin qubka ama gacan ku sameynta.
5. Farqiga u dhexeeya DIP & SIP
DIP: Laba saf oo hoggaamiyeyaal ah ayaa ka soo baxa dhinaca qalabka waxayna ku yaalaan xaglo qumman diyaarad u dhiganta jirka qeybta.
SIP: Saf isdabajoog ah oo toos ah ama biinanka ayaa ka soo baxa dhinaca qalabka.